Aqoonyahan-Dhaqdhaqaaqayaal ah Muwaadiniinta Caalamiga ah: U-doodista Ka-Qaybgalka Degmooyinka iyo Joogtada ah Haweenka ee Siyaasadda Nabadda - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
[ Janaayo 17, 2022 ] Raadinta Nabadda: Ethnography ee dugsiga sare ee Hindiya Research
[ Janaayo 15, 2022 ] Martin Luther King iyo Sheekada Montgomery - Manhajka iyo Hagaha Daraasadda (Isbahaysiga Dib-u-heshiisiinta) CV
[ Janaayo 14, 2022 ] Kala qaybsanaantu wali waxay dib u dhigtaa dugsiyada Waqooyiga Ireland Warar & Muuqaal
[ Janaayo 13, 2022 ] Warbixinta Sahanka Dhallin-yarada: Aqoonta Dhallinyarada & Xiisaha Waxbarashada Nabadda Research
[ Janaayo 11, 2022 ] Codsiga Taageerada Joogtada ah ee Waxbarashada Sare ee Afgaanistaan Digniinta Waxqabadka
Aqoonyahan-Dhaqdhaqaaqayaal ah Muwaadiniin Caalami ah: U ololeynta Ka Qaybgalka Haweenka Degmooyinka iyo Joogtada ah ee Siyaasadda Nabadda
July 13, 2020 Warar & Muuqaal 0
Ku dabool sawirka "Haweenka, Nabadda iyo Amniga: Daraasad ku saabsan Hindisaha lagu Meelmarinayo Qaraarka Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay ee 1325" (2016) oo uu soo qoray Xafiiska Filibiin ee La Taliyaha Madaxweynaha ee Geeddi-socodka Nabadda.
Qoraalkan ay soo saartay Betty Reardon waa kii labaad ee taxanaheennii gaabnaa ee "Cusbooneysiinta Haweenka, Nabadda, iyo Amniga. ” Tixda taxanaha ahi waxay ku jirtaa indha indheyn lagu sameynayo qaar ka mid ah horumaradii ay soo martay UN-ka 75-kii sano ee la soo dhaafay si loo xaqiijiyo “xuquuqda sinnaanta ragga iyo dumarka iyo quruumaha waaweyn iyo kuwa yarba,” ujeeddaduna tahay, gaar ahaan tan haweenka oo loo yaqaan " Global South, ”sida aasaasiga u ah nabad cadaalad ah. Mashruucan wuxuu soo bandhigayaa fikradda iyo istiraatiijiyadda qorshooyinka waxqabad ee dadka: qorshooyinka bulshada rayidka oo ah hab loogu tala galay haweenka ku nool dhulka inay fikrad badan ku yeeshaan siyaasadaha guud si loo meel mariyo UNSCR 1325 ee haweenka, nabadda, iyo amniga. Waxaan u aragnaa qorshaynta waxqabadka dadka inay tahay dhaqan wax barasho oo isbeddel leh oo lagama maarmaan u ah falanqaynta arrimaha amniga iyo in lagu xoojiyo muwaaddiniinta inay qaadaan tallaabo bulsheed iyo siyaasadeed oo heer maxalli ah iyo heer qaran ah si loo gaaro aragtida dheddig ee amniga aadanaha. Maqaalkani wuxuu tixraacayaa laba cutub oo gaagaaban oo ka tirsan buugga “Furitaanka Nabadda: UNSCR 1325, Haweenka iyo Amniga Hindiya. " Cutubyadan, oo loogu talagalay inay u soo bandhigaan akhristayaasha fursadaha nabadda ee ka-qaybgalka haweenka, ayaa lagala soo bixi karaa hoos.
Ka soo deg cutubyada “Furitaanka Nabadda: UNSCR 1325, Haweenka iyo Amniga Hindiya. ”
Caasha Hans: “Nabadda iyo Amniga Jinsiga: Isbeddel ku yimid Jaangooyo"
Betty Reardon:Qorshayaasha Waxqabadka Dadweynaha: Ku raad-galka Amniga Aadanaha iyada oo la raacayo Waxqabadyada Bulshada Rayidka ah ee Deegaanka si loo Hirgeliyo UNSCR 1325. "
Mabda 'udub dhexaad u ah dhaqdhaqaaqyada haweenka ee sinnaanta iyo nabadda ayaa ah in ka-qaybgalka siyaasaddu uu yahay xuquuq aasaasi ah oo aadanaha; in ay tahay in la wada helo. Ka-qaybgalka buuxa ee haweenka oo loo siman yahay waxay muhiim u tahay dhammaan dadaallada nabadda iyo amniga. La'aanteed, caddaalad iyo nabad waarta lama gaari karo. Doodahan ayaa lagu wargeliyay shaqada aqoonyahannada u ololeeya haweenka-ab ka ab. Waxay yihiin doodaha udub dhexaad u ah sheegashooyinka iyo sharraxaadyada lagu muujiyey guddiga fiidiyowga in bilaabay taxanahan "Cusbooneysiinta ku saabsan Haweenka, Nabadda iyo Amniga. ” Waxay dhiirrigeliyeen guulaha taariikhiga ah ee lagu arkay taxanaha, tallaabooyinka horumarka nabada iyadoo loo marayo kaqeybgalka haweenka ee siyaasadda oo loo siman yahay, mabda'a aasaaska ee Qaramada Midoobay. Hordhaca maanta UN Women waxaa loo aasaasay sidii Guddiga ee Xaaladda Haweenka, mid ka mid ah hay'adihii ugu horreeyay ee khaas ah ee Qaramada Midoobay. Hase yeeshe, in kasta oo Guddiga iyo astaamaha lagu garto, sida guddidu tilmaantay, shan iyo toddobaatan sano ka dib bulshada adduunku way ka fog tahay inay gaarto sinnaanta haweenka. Laakiin "wali way ku adkeysatay."
Ka-qaybgalka buuxa ee haweenka oo loo siman yahay waxay muhiim u tahay dhammaan dadaallada nabadda iyo amniga. La'aanteed, caddaalad iyo nabad waarta lama gaari karo.
Adkaysigaas, sida gudigu cadeeyay, wuxuu kujiraa adkaysiga dhaqdhaqaaqa caalamiga ah ee dadaalada haweenka ee kaladuwan, noocyada kaladuwan iyo meelwalba leh ee loogu talagalay samaqabka dadka, bulshadooda, quruumaha, iyo heer caalami. Haweenka ku nool tuulooyinka Hindiya waxay ku xiran yihiin haweenka safiirada UN-ka iyo madaxda hay'adaha ee shabakad caalami ah oo ay ku jiraan haweenka tuulooyinka adduunka oo dhan, haweenka adeegga magaalooyinka iyo shaqaalaha warshadaha iyo haweenka xirfadleyda ah meel kasta, oo ay ka mid yihiin aqoonyahannada haweenka u ololeeya. In kasta oo welwelka gaarka ah iyo yoolalka degdegga ahi ay aad uga duwan yihiin kuwa kale, haddana haweenkani waxay ku midaysan yihiin hal ujeedo guud, iyagoo wax kasta oo karaankooda ah ku samaynaya sidii ay u gaari lahaayeen nolol xorriyad leh oo xorriyad iyo sharaf u leh naftooda iyo dhammaan kuwa ay daryeelaan oo ay daryeelaan - iyo kan dambe ayaa ka kooban inta badan qoyska aadanaha.
Doorka aqoonyahannada u ololeeya wuxuu ahaa labo laab. In kasta oo ujeeddooyinka asalka u ah sinnaanta iyo aqoonsiga waxa hortaagan ay ka soo jeedaan waayo-aragnimada nool ee kuwa "dhulka" ku jira xaaladaha dhabta ah ee caddaalad darrada iyo rabshadaha, fikradda laga qabo khibradahaas marka la eego nabadda dhibaatada leh waxaa aqoonyahan-dhaqdhaqaaqa. Markaa magacaabista bahalka iyo soo jeedinta waxyaabo kale, sida qaab-dhismeedka amniga aadanaha ee dumarka, sidoo kale tixraaca guddiga, ayaa ahaa waxtarkoodii ugu horreeyay. Ta labaad, oo taxanahani qayb ka yahay, waxay ahayd soo bandhigidooda degdegga iyo ku-habboonaanta khibrada haweenka ee dhammaan arrimaha adduunka ee bulshada rayidka ah ee adduunka. In kasta oo dhammaan dhaqdhaqaaqyadan ay raadinayaan inay haweenka ka keenaan "dhulka" dhammaan wada-tashiyada, baahida loo qabo waxay u horseedday bulshada caalamiga ah ee aqoonyahannada u ololeeya haweenka inay sameeyaan wax badan oo ka mid ah shaqada si ay u keenaan xaqiiqooyinka haweenka si ballaaran dareenka bulshada, iyo inay u doodaan dawladaha hay'adaha dawliga ah ee horumarinta dhammaan xuquuqda haweenka ee haweenka.
Dacwadahan awgeed, inteeda badan waxaa isku dubariday Shabakada Caalamiga ah ee Dumarka Nabadda (GNWP), ugu yaraan 70 Qorshe hawleed qaran ayaa la soo saaray. Waxa kale oo ka mid ahaa u doodiddan iyo qiimaynta xaaladda iyo guulaha NAPS in fikradda qorshayaasha waxqabadka ee dadka iyo qorshooyinka maxalliga ah ee GNPWs ay soo baxeen.
Marka loo eego falanqeyn ay sameysay Ururka Haweenka Caalamiga ah ee Nabadda iyo Xorriyadda (WILPF), laga soo bilaabo Juun 2020, 84 Dowladaha Xubnaha ka ah UN (44% dhammaan Dowladaha xubnaha ka ah UN) waxay leeyihiin UNSCR 1325 Qorshayaasha Waxqabadka Qaranka (NAPs).
Aaladda aasaasiga ah ee u doodista, markii ugu horreysay ee loo adeegsaday inay wax ka qabato deegaannadooda aqoonyahannada, waxay ahayd daabacaadda fikradahooda fikradeed iyo cilmi-baarista ka socota dhulka soo saaray. Mid ka mid ah daabacaadda noocan oo kale ah ayaa ka mid ah sannad-guurada sannadlaha ee ay arkeen guddiga iyo taxanahan Cusbooneysiinta. Galmada iyo Nidaamka Dagaal, markii ugu horeysay la daabacay 1985, waxaa lagu sii daayay tarjumaada Kuuriya usbuucii ka horeeyay taxanahan (qoraal dheeri ah ayaa ka hadli doona turjumaadaas). Weli ka dhex akhriso tiro aad u tiro badan oo daabacado ah oo ku saabsan mawduuca, waxay ahayd mid muhiim u ah qaar ka mid ah dhismaha shabakadda oo keenay xubnaha guddiga iyo kuwo kale oo badan oo iskaashi ah.
Daabacaaddii ugu dambeysay waxay ahayd midda ay ka wada hadlayaan labada ka mid ah, Asha Hans (sidoo kale eeg Hans: COVID-19 Caadiga Cusub: Militariga iyo Ajandaha Cusub ee Haweenka ee Hindiya) iyo Betty Reardon waxay u ololeeyeen qorshooyinka waxqabadka ee dadka. Wadahadalada ka socda isku imaatinka aqoonyahanada u ololeeya arrimaha haweenka ee koonfurta Aasiya, oo ay ugu yeertay Caasha, ayaa soo saaray tixgelin ku saabsan waxtarka suurtagalka ah ee qorshooyinka bulshada rayidka ah sida hab loogu talagay haweenka ku nool dhulka inay ku yeeshaan talo dheeraad ah siyaasadaha guud si loo meel mariyo UNSCR 1325. Iyo, dheeraad ah si weyn, si loogu suurtageliyo haweenka inay gartaan tallaabooyinka ay iyagu qaadi karaan, oo aan culeys ku ahayn culeysyada xafiisyada iyo dib u dhaca qorshooyinka dowladda ee inta badan lahaa ma mudnaanta koowaad siiyaan ama maalgeliyaan qorshooyinka ay qaadan karaan. Dhaqdhaqaaqayaasha, ardayda, iyo muwaadiniinta kale, nashqadeynta qorshooyinka noocan ah waxay u noqon kartaa wado lagu kasbado faham dheeri ah dhibaatooyinka dhabta ah ee ka jira dhulka iyo talaabada siyaasadeed ee ay qaadi doonto si looga gudbo
Dhaqdhaqaaqayaasha, ardayda, iyo muwaadiniinta kale, qorshaynta qorshooyinka noocaas ah [qorshayaasha waxqabadka ee dadka] waxay u noqon kartaa hab lagu kasbado faham dheeri ah dhibaatooyinka dhabta ah ee ka jira dhulka iyo talaabada siyaasadeed ee ay qaadi doonto si looga gudbo
Warbixinnada aqoonyahannada u ololeeya iyo soo-jeedimaha ka soo baxay isu-imaatinka Koonfurta Aasiya waxaa loo ururiyey in lagu daabaco 1325 sannad-guuradii shan iyo tobnaad ee Caasha iyo Swarna Rajagopalan (sidoo kale eeg Rajagopalan: Cudurka Faafa ee COVID-19: Waa Daqsi La Baran Karo) Furitaanka Nabadda: UNSCR 1325, Haweenka iyo Amniga Hindiya. Qeybaha laga soo qaatay aruurinta la soo dhejiyay waxaa laga soo qaatay cutubka Caasha, “Nabadda iyo Amniga Jinsiga: Isbeddel ku yimid Jaangooyo"Iyo cutubka Betty,"Qorshayaasha Waxqabadka Dadweynaha: Ku raad-galka Amniga Aadanaha iyada oo la raacayo Waxqabadyada Bulshada Rayidka ah ee Deegaanka si loo Hirgeliyo UNSCR 1325. ” Waxaan soo bandhigeynaa qeybtan kooban oo caqli-gal ah iyo geedi socod lagu soosaarayo qorshe ah "astaamaha bamka," farsamooyinka lagu bilaabayo akhristayaasha khibradaha barasho / waxqabad si loo kordhiyo fahamkooda xaqiiqda la'aanta amniga aadanaha ee haweenka, awoodooda iyo dadaallada lagu gaarayo iyada, iyo markay bilaabayaan inay qorsheeyaan ficilladooda gaarka ah ee nabadda iyaga oo ka qayb qaadanaya haweenka.
# waxqabadka bulshada
# dhalasho caalami ah
#ku darso haweenka nabadda iyo amniga
#dumarka nabada dhisa
Haweenka, Guddiyada Fiidiyowga Nabadda iyo Amniga: U-kuurgelida 2020 waa Sannad-guuleed Sanad-guuleed
"Jinsi ahaanta iyo Nidaamka Dagaal": Sannad-guurad iyo Tarjumaad
Dib U Noqosho: Maxay Ka Dhigi Kartaa Dib U Soo Noqoshada Tijaabinta Nukliyeerka Caadi Ahaan Caadi Ah?
Waxaa laga yaabaa 30, 2020 CV 0
Wax kasta iyo horumar kasta oo laga sameeyay xakamaynta faafitaanka hubka nukliyeerka, iyo sidoo kale ka takhalusiddooda, waxaa la gelinayaa khatar iyadoo ay suuragal tahay in dib loo bilaabo tijaabinta nukliyeerka. Aqoonyahanada nabada waa inay si dhab ah oo deg deg ah feejignaan ugu siiyaan bayaankan ka soo baxay Tirtirida 2000 hadii aan rabno inaan ku guuleysano dhaqan celinta cusub ee aan bilawnay inaan ka fikirno.
[sii wad akhriska…]
Salaamaha Xilliga Dhammaan Ku-Dhaqanka Waxbarshada Nabadda, U-doodayaasha iyo Taageerayaasha
December 23, 2019 Features 0
Mid kasta iyo dhammaantiin oo u dabaaldegaya fasax sanadle ah, waxaan urajeynayaa mid farxad leh, iyo adduun yar oo rabshad iyo caddaalad ku dhisan oo aan higsaneyno maadaama aan midba midka kale ugu fidineyno midnimo wax kasta oo aan ku guuleysaneyno. [sii wad akhriska…]
Aqoonsiga istiraatiijiyadda iyo adkeynta waxqabadka gobolka ee Waxbarashada Muwaadinnimada Caalamiga ah
Waxaa laga yaabaa 3, 2017 Warbixinnada Waxqabadka, Siyaasadda 0
Kulankii Shabakadda ee 2017-ka Shabakadda Saxaaraha Afrika ee Gobollada Caalamiga ah ee Dhalashada (GCED) oo hal ku dhig looga dhigay '' Aqoonsiga Istaraatijiyadaha iyo Xallinta Waxqabadka Gobolka ee GCED '' waxaa lagu qabtay 6-7 Abriil magaalada Johannesburg, Koonfur Afrika. Kulankan oo ay si wada jir ah u soo qabanqaabiyeen xafiiska UNESCO ee Koonfurta Afrika iyo Xarunta Aasiya iyo Baasifigga ee Waxabarashada Caalamiga ah, kulanku wuxuu lahaa saddex ujeedo: (1) in la xoojiyo hababka gudbinta ee barnaamijyada GCED ee ku wajahan hagaajinta saamaynta iyo hubinta ka-qaybgalka loo dhan yahay; (2) si loo horumariyo baaxadda iyo fidinta barnaamijyada GCED ee gobolka; iyo (3) in la kobciyo kaqeybgalka siyaasadeed iyo hoggaaminta si loo hubiyo ka go'naanta daneeyayaasha. [sii wad akhriska…]